भारतमा प्रमुख औषधि कम्पनीहरू के हुन्? | निरपेक्ष यात्रा
दानियल | | भारत
भारतीय औषधि उद्योग संसारको सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक हो। द भारतको प्रमुख औषधि कम्पनीहरू सँगै तिनीहरू जेनेरिक औषधिको विश्वको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हुन्। थप रूपमा, तिनीहरूले खोपहरूको लागि विश्वको मागको 60% भन्दा बढी आपूर्ति गर्छन्।
त्यति मात्र होइन: भारतमा करिब १,४०० फार्मास्युटिकल प्लान्टहरू छन् जसले स्वीकृत गरेको छ WHO। तिनीहरूले 60.000 विभिन्न थेराप्यूटिक कोटीहरूबाट लगभग 60 जेनेरिक ब्रान्डहरू उत्पादन गर्छन्। 3.000 भन्दा बढी औषधि कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् र 10.500 भन्दा बढी उत्पादन प्रयोगशालाहरूको बलियो नेटवर्कको साथ, यो सुरक्षित रूपमा भन्न सकिन्छ। भारत ग्रह मा महान फार्मेसी हो।
को औषधि उद्योग भारत सन् २०१९ मा यसको मूल्य ३६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो। जेनेरिक औषधिहरू, 2019% बजार साझेदारीको साथ, यसको उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो खण्ड हो।
यहाँ भारतमा प्रमुख औषधि कम्पनीहरूको सूची छ। हाम्रो शीर्ष 10:
1 क्याडिला स्वास्थ्य सेवा
2 टोरेन्ट फार्मा
4 रेड्डीज ल्याब्सका डा
5 लुपिन लिमिटेड
6 अरविन्द फार्मा
क्याडिला स्वास्थ्य सेवा
यो भारतको सबैभन्दा ठूलो औषधि कम्पनी हो। यो 1952 मा स्थापित भएको थियो रमणभाई पटेल र अहमदाबाद मा आधारित छ। र भारतको सबैभन्दा ठूलो औषधि कम्पनी बनेको छ।
क्याडिला हेल्थकेयरका देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा नयाँ मुम्बई, अंकलेश्वर, चांगोदर, गोवा, भटवा, बड्डी, दभासा, बडोदरा, दभासा र पातालगंगामा दसवटा उत्पादन कारखानाहरू छन्।
अहमदाबादमा यसको मुख्यालय र देशका विभिन्न भागहरूमा निर्माण कारखानाहरू पनि छन्। फार्मा टोरेन्टले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS), ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसअर्डर, एनाल्जेसिक्स र एन्टिबायोटिकको चिकित्सा उपचारका लागि औषधि निर्माणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ।
हालैका दशकहरूमा शानदार वृद्धिको साथ, 1935 मा मुम्बईमा स्थापित CIPLA, भारतको सबैभन्दा नाफा कमाउने औषधि कम्पनीहरू मध्ये एक भएको छ।
फर्मको विकास हुन्छ डिप्रेसन, मधुमेह, वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू जस्ता विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्ने औषधिहरू। यसको कुल बिक्री आंकडा प्रति वर्ष लगभग 7.000 मिलियन रुपैयाँ (लगभग 78 मिलियन यूरो) हो। यसमा सात उत्पादन केन्द्रहरू छन् जसमा २२,००० भन्दा बढी कर्मचारीहरू काम गर्छन्।
रेड्डीज ल्याब्सका डा
निस्सन्देह, एक उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण संग, भारत मा प्रमुख औषधि कम्पनीहरु मध्ये एक। कम्पनी द्वारा 1984 मा स्थापित भएको थियो डा अन्जी रेड्डी। यसको मुख्यालय हैदराबादमा छ र यसले 180 भन्दा बढी औषधिहरू र 50 भन्दा बढी सक्रिय औषधि सामग्रीहरू उत्पादन गर्दछ।
भारतमा सातवटा डा. रेड्डीज ल्याबहरू उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू छन्। देश बाहिर, फर्मको रसियामा प्रयोगशालाहरू छन् र दक्षिण एसियामा बेल्जियमको औषधि कम्पनी यूसीबी एसएको औषधि वितरण गर्दछ।
यसको बिक्रीको आंकडा वार्षिक ५ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । को पहलमा सन् १९६८ मा लुपिनको जन्म भएको थियो देश बन्धु गुप्ता, देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित अनुसन्धानकर्ताहरू मध्ये एक। कम्पनीले हाल दक्षिण अफ्रिका, जापान, अष्ट्रेलिया र युरोपेली संघ लगायत विश्वका ७० भन्दा बढी देशहरूमा आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री गर्दै आएको छ।
भारत मा शीर्ष फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरु
1988 मा स्थापित, अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड जेनेरिक औषधि र सक्रिय अवयवहरूको निर्माण र उत्पादन दुवैसँग सम्झौता गर्दछ। उसले छवटा विशिष्ट चिकित्सकीय क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ: केन्द्रीय स्नायु प्रणाली, हृदय, एन्टिबायोटिक, एन्टिरेट्रोभाइरल, एन्टिएलर्जिक र ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजिकल उत्पादनहरू।
कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू १२० भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात गर्दछ र वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ।
Idnia मा अर्को मुख्य औषधि कम्पनीहरु द्वारा स्थापित दिलीप सgh्घवी सन् १९८३ मा गुजरातको वापी क्षेत्रमा । सुरुमा सन फार्माले विशेष गरी मनोवैज्ञानिक विकारहरूको उपचारमा आधारित पाँच प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न समर्पित थियो। पछि, कम्पनीले औषधि प्राप्त गर्यो रानब्याक्सीयसको पुँजी वृद्धि र उत्पादन विस्तार।
सन फार्मास्युटिकलको ७०% औषधि संयुक्त राज्यमा बेचिन्छ। हालका वर्षहरूमा कम्पनीले बलियो विस्तार सुरु गरेको छ जसले यसलाई मेक्सिको, इजरायल वा ब्राजिल जस्ता देशहरूमा प्लान्टहरू खोल्न नेतृत्व गरेको छ।
Innovexia Life Sciences Pvt Ltd को रूपमा मान्यता प्राप्त छ विश्वव्यापी अग्रणी कम्पनी विभिन्न औषधिहरूको उत्पादन र मार्केटिङमा। यस औषधि कम्पनीको प्रतिष्ठा यसको विज्ञहरूको टोली, यसको अत्याधुनिक सुविधाहरू र नयाँ अनुसन्धान परियोजनाहरूमा यसको लगानीको उच्च स्तरमा निहित छ।
बम्बईमा आधारित, Alkem प्रयोगशालाहरू भारतको प्रमुख औषधि कम्पनीहरू मध्ये एक हो। यसको उत्पादनहरू 40 भन्दा बढी देशहरूमा बेचिन्छन्- उच्च गुणस्तरको जेनेरिक औषधि, सक्रिय औषधि सामग्री र न्यूट्रास्युटिकल्स। कुलमा, 800 भन्दा बढी ब्रान्डहरूले सबै मुख्य चिकित्सकीय खण्डहरू कभर गर्दछ।
Alkem ले ट्रेडमार्क अन्तर्गत संयुक्त राज्यमा उत्पादनहरू बजार र बिक्री गर्दछ उल्टाउनुहोस्। त्यसैगरी, यसले अष्ट्रेलिया, चिली, फिलिपिन्स र काजाकस्तान जस्ता अन्य बजारहरूमा आफ्नो गतिविधि विकास गर्दछ।
हाम्रो सूची संग समाप्त हुन्छ IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड, छ दशक भन्दा बढी अनुभव संग कम्पनी। यसको उत्पादनहरू लगभग 120 देशहरूमा वितरित छन्, जबकि यसको सुविधाहरूले मुख्य औषधि नियामक अधिकारीहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा पाएका छन्।
IPCA को मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक भनेको यसको सबै उत्पादनहरूमा गुणस्तरको उच्च स्तर कायम राख्नु हो, निश्चित चिकित्सा उपचारहरूमा विशेषज्ञतामा शर्त लगाउनु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » भारतमा प्रमुख औषधि कम्पनीहरू के हुन्?
राजु महतानी भन्यो
म भारतका प्रयोगशालाहरूको नाम जान्न चाहन्छु, जुन पेरुको DIGEMID द्वारा प्रमाणित छन्।
राजु महतानीलाई जवाफ दिनुहोस्
इलियास तहन भन्यो
म प्रयोगशाला उत्पादनहरूको सूची जान्न चाहन्छु कि तिनीहरूसँग के छ जान्न र तिनीहरूसँग काम गर्न सक्षम हुन, हामीसँग भेनेजुएला, कोलम्बिया र मध्य अमेरिकाका लागि प्रतिनिधि सभा छ।
ELIAS TAHAN लाई जवाफ दिनुहोस्